काठमाडौं, २ फागुन । नेपालमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पनि समुदाय स्तरमा देखिन थालेको छ । अहिले सम्म १३ जनामा यस्तो भाइरस देखिएको छ । यो बेलायतमा देखिएको युके भेरिएन्ट भाइरस हुन सक्ने चिकित्सकहरूको आशंका छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार दुई हप्ता अघि मुक्तिनाथ दर्शन गरी पोखरा हुँदै काठमाडौं आएका एक नेपालीमा कोरोना परीक्षण गर्दा नयाँ प्रकारको भाइरस पत्ता लागेको थियो । उनमा ‘एस जिन’ देखिएको थिएन ।
ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका पोखराका १२ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सबैमा नयाँ भाइरस पुष्टि भएको थियो । युके भेरिएन्ट भाइरसमा पनि ‘एस जिन’ देखिँदैन । त्यसैले उनीहरूमा अहिले देखिएको भाइरस पनि युके भेरिएन्ट हुन सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ ।
नेपालमा पहिलो पटक गत २७ पुसमा तीन जनामा युके भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो । उनीहरू सबै बेलायत बाट फर्किएका थिए । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पहिचान गर्ने प्रयोगशाला नेपालमा छैन । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङकङ स्थित प्रयोगशालामा उनीहरूको जिनोम सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो ।
केही हप्ता भित्रै केन्द्रीय प्रयोगशालामा जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्न मिल्ने उपकरण जडान गरिने निर्देशक पौडेलले बताए । अहिले नेपालमा ‘एस जिन’ पोजेटिभ वा नेगेटिभ के छ भनेर मात्रै हेर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भाइरस देखिए पनि सार्वजनिक गरेको थिएन ।
युके भेरिएन्ट हो वा होइन भन्ने यकिन भइनसकेका कारण सार्वजनिक नगरिएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोरोना परीक्षणमा ‘एस जिन’ नभेटिएपछि विज्ञहरूले युके भेरिएन्टको शंका गर्छन् । त्यस्ता नमुनाको ‘जिनोम सिक्वेन्सिङ’ गरेर मात्र नयाँ स्वरूपको भाइरस भए–नभएको छुट्याउन सकिन्छ ।
नयाँ भाइरस देखिएका १३ जनाको नमुना केन्द्रीय प्रयोगशालामा थुपारिएको छ । संक्रमितहरूको ट्राभल हिस्ट्री छैन । केन्द्रीय प्रयोगशालाका अनुसार अन्य जिल्लाबाट पनि यस्ता नमुना आउने क्रम बढ्दै छ । अब हरेक प्रदेशबाट नमुना मगाएर जिनोम सिक्वेन्सिङ गरिनेछ ।
सरकारले दैनिक कोरोना संक्रमित घट्दै गएको बताएका वेला नयाँ प्रकारको भाइरस समुदायस्तरमा देखिएपछि चिकित्सकहरू चिन्तित देखिएका छन् । बेलायतमा देखिएको युके भेरिएन्ट अहिले देखिएको कोरोना भाइरसभन्दा ७० प्रतिशत तीव्र गतिमा फैलिने गरेको छ ।
यो अहिलेसम्म विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. पौडेलले नयाँ भाइरस पुष्टि भए पनि अहिले सम्म ठूलो क्षति नगरेको बताए । ‘युके भेरिएन्ट कोरोना भाइरसभन्दा ७० प्रतिशत तीव्र गतिमा फैलन्छ । तर, अहिले सम्म नियन्त्रण बाहिर गएको छैन । त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्दैन । तर, सुरक्षाको हिसाबले पूर्ण रूपमा सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ निर्देशक पौडेलले भने ।
सरकारले १ पुसयता बेलायतबाट नेपाल आउनेलाई १४ दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, युके भेरिएन्ट फैलिएका फ्रान्स, जर्मनी, भारत, साउथ अफ्रिका लगायत देशबाट आउने भने क्वारेन्टिनमा बस्ने गरेका छैनन्, सीधै घर वा गन्तव्यमा जाने गरेका छन् ।
विज्ञहरूले नेपालमा पनि धेरै प्रकारका भाइरस बनिसकेको हुने अनुमान गरेका छन् । हाल देशमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ । शनिबार सम्म स्वास्थ्यकर्मी र अन्य फ्रन्टलाइनर कर्मचारी गरी दुई लाख १० हजारले खोप लगाइसकेका छन् । यो खोपले नयाँ प्रजातिको भाइरस विरुद्ध पनि काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने अध्ययन नभएको निर्देशक पौडेलले बताए ।